Casio G-SHOCK G-LIDE GBX-100KI-1ER sy Kanoa Igarashi | TeraNews.net
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 01.10.2021
Fiaraha-miasa mahaliana iray no misolo tena ny marika famantaranandro elektronika japoney mahafinaritra sy mpialokaloka japoney. Ny andiam-fiambenana G-LIDE Casio G-SHOCK dia nameno maodely tokana GBX-100KI-1ER. Ny vidin'ny entana vaovao nambara dia $ 270. Ny fiandohan'ny varotra dia voalahatra amin'ny 5 Novambra 2021.
Casio sy Kanoa Igarashi - ny fomba fanao temotra mety
Mety ho hafahafa ny nanapa-kevitra ny orinasa Japoney Casio fa hanao dingana toa izany. Rehefa dinihina tokoa, dia mandeha tsara ny marika, ary ny fitetezana surf eto amin'izao tontolo izao dia tsy dia malaza amin'ny fanatanjahantena hafa. Saingy i Kanoa Igarashi no nahavita nanova tanteraka ny famolavolana famantaranandro, nampiavaka azy tamin'ny gadget hafa rehetra tao amin'ny andiany G-LIDE.
Ny andraikitr'ity sendika ity dia ny fampitomboana ny atin'ny famantaranandro. Ny fananana tabilao mihoampampana sy mikoriana dia fampahalalana tena sarobidy ho an'ny surf. Ary ny angona marina kokoa, ny tsara kokoa. Raha ny fampiasa, dia nivadika kalitao sy tsara tarehy izy io. Ny famantaranandro Casio GBX-100KI-1ER dia misy maodely Bluetooth ho an'ny fampifanarahana amin'ny smartphone.
Ankoatry ny fidinana sy ny onja, ny famantaranandro dia mampahafantatra momba ny dingana amin'ny volana, mahafantatra ny fomba hamaritana ny halaviran'ny dia sy manampy amin'ny fampiofanana. Fa tsy mahagaga intsony ny fiasa toy izany. Noho izany, ny fanamafisana dia ny famolavolana. Ary nahavita nanao famantaranandro manokana ny Japoney.
Faly aho fa ny famantaranandro Casio dia natao tamin'ny fomba tsotra - tsy misy sisin-doko na jiro miloko. Ny famantaranandro mainty iray manontolo dia misy blotches maivana eny an-tsisin'ny efijery. Aseho fotsy ny lahatsoratra. Eo amin'ny vera sy ny bezel dia misy sarin'i Kanoa Igarashi mitsingevana ao amin'ny tampon'ny onja. Ilay fehin-kibo sy sarony dia mitondra ny sonia tany am-boalohany an'ny mpialokaloka. Ny isa 50 amin'ny fehy dia ny mpandray anjara. Nandritra ny WSL Championship Tour dia nisolo tena an'io isa io i Canoa.